मोतीराम भट्टको जन्मजयन्ती विविध कार्यक्रमबीच मनाइँदै::Milap News
मोतीराम भट्टको जन्मजयन्ती विविध कार्यक्रमबीच मनाइँदै
युवाकवी मोतीराम भट्टको १५४ औँ जन्मजयन्ती शुक्रबार (आज) विविध कार्यक्रमबीच मनाइँदैछ । साहित्यकार तथा साहित्यीक प्रतिष्ठानहरुले उहाँको ब्यक्तित्व तथा कृतित्वमाथी विश्लेषण गर्दैजन्मजयन्ती मनाउँदै छन् ।
राष्ट्रिय विभूति समेत रहनुभएका मोतीरामको १ सय ५३ वर्ष पहिले वि.सं. १९२३ भाद्र कृष्ण औशी अर्थात कुशे औँशीकै दिन जन्म भएको थियो । नेपाली गजलका महानायक मानिएका भट्टको कथा, नाटक, निबन्ध पनि कलम त्यत्तिकै बलियो रहेको थियो ।
कुशे औँसीका दिन जन्मिनुभएको उहाँको वि.सं. १९५३ कुशे औसीकै दिन ३० वर्षको अल्पायुमै निधन भएको थियो । श्रृङ्गार रसलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर उहाँले गजल रचना गरेका थियो ।
युवा कवि भट्टले आदिकवि भानुभक्तको जीवनी पहिलोपटक प्रकाशनमा ल्याउनुभएको थियो । उहाँको साहित्य रचना मात्र नभई पत्रकारितामा पनि हात चलेको पुराना साहित्यकारहरु बताउछन् । उहाँले नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका ‘गोर्खा भारत जीवन’ प्रकाशित गर्नुभएको थियो ।
नेपाली साहित्यमा कविता, काव्य, नाटक, पत्रकारिता, जीवनी, गजल, संवाद र सम्पादन विधामा कलम चलाउनुभएका मोतीरामका प्रकाशित कृतिहरू क्रमशः मनोद्वेग-प्रवाह, गजेन्द्रमोक्ष, पञ्चक प्रपञ्च, प्रल्हाद भक्तिकथा, गफाष्टक, उषाचरित्र, तीजको कथा, उखानको बखान, गुलसनाबेर, वालाजी वर्णन, चाणक्य नीति, कमल भ्रमर संवाद, काशीराज चन्दसेन, संगीत चन्द्रोदय, स्वप्नाध्याय, प्रियदर्शिका, पिकदूत, कालमहिमा, शकुन्तला, कविसमूह वर्णनम् र कवि भानुभक्तको जीवनचरित्र रहेका छन् ।
कवि मोतीरामले भानुभक्तीय रामायणको पनि अनुवाद सम्पादन गर्नुभएको छ । यसका साथै मोतीरामका दुई दर्जनभन्दा बढी फुटकर कविताहरू रहेका छन् भने गजल र गीतको पाटो त्यत्तिकै बलियो छ ।